Tanzania Crusher>>igwe igwe>> Raymond Mill
Raymond Mill, Shanghai XSM bụ ọkachamara ore crusher ngwá, Raymond Mill, n'ibu beneficiation ngwá, ore-egwe ọka akụrụngwa manufacturers.Ore Ngwuputa usoro, mbụ belt ebu, onye na-enye nri ọkụ, ihe eji ebu oku ezigara ya nkuku uhie, nkpọchi mmetụta, nnyeghari hydraulic bụ ihe na-eme ka a ghara ikpuchi ya, nke abụọ nke a obere jawcrusher, ihe na-esi ísì nyochaa nke atọ nke atọ na-ekpuchi jijiji na ihuenyo gbakwunyere nkọwa zuru oke nke ore ahụ na-eburu ya igwe mgbidi, igwe na-edozi Ngwọta nlekọta ọgwụ dị mma ndị na-arụ ọrụ magnet, igwe onu mmiri họrọ ọtụtụ ụdị mkpa ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe a, ọ bụ naanị ọrụ nhazi ọ bụla, Shanghai XSM dabere n'ụdị ụdị gị bụ ngwá ọrụ m kachasị mma, Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, anyị ga-akpọtụrụ anyị ma ọ bụ pịa aka nri akụkụ nke akara ngosi akara, ndị ọrụ anyị na-ahụ maka ịchọrọ gị azịza zuru ezu.
Site na ụlọ ọrụ na-arụpụta Raymond igwe adabara Ngwuputa, chemical ụlọ ọrụ, ụlọ ihe, nkà mmụta banyere ígwè na ndị ọzọ na ebe nke egweri. Ọ nwere ike na nkume igwe nri quartz, feldspar, calcite, talc, barite, fluorite, obere ụwa, marble, egbuke, bauxite, manganese ore, ígwè ore, ọla kọpa, phosphate ore ego, ICT esịtidem ngalaba nke ekweghị ekwe na-erughị asaa degrees na mmiri na-erughị 6 %. The ikpeazụ size nwere ike na-achịkwa na 0.044 0.125 mm ka mm n'etiti, n'ihi na o nwere àgwà ndị tesis na ntupu ~ 100 325 tụnyere ntupu.
Raymond Mill Atụmatụ:
1. Ọ bụ usoro siri ike, na-ekpuchi obere mpaghara, ọ bụ usoro ntinye onwe ya na-arụpụta ihe sitere na ihe ndị bụ isi na ntụ ntụ ikpeazụ.
2. A na-ekesa nke ọma nke ntụcha ikpeazụ, 99% nke ha nwere ike ịgafe na ihuenyo ahụ, igwe ndị ọzọ na-egwe ọka nwere ike ịbịaru nso.
3. Ngwa Raymond Mill Conmission Kpọrọ Imechi na Ngwá Pulley, Onye Na-agbanwe Ụkwụ na Ọrụ Kwesịrị Ekweta.
4. Otu ihe dị mkpa iji nweta ígwè dị elu, njigide nke abrasion na-ewere ihe abrasion elu dị elu, igwe dum nwere nnukwu abrasion ma nwee ọrụ a kwenyere.
5. Usoro eletrik ya na-ejikwa nlezianya na-achịkwa, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịchọpụta na ọ bụghị ndị mmadụ na-arụ ọrụ, na ihe ndị ọzọ, na ihe ndị ọzọ.
Nkọwa nke Raymond Mill:
ụdị ala Ring Max.
Nri Nri (mm) Nke a mechara
(Mm) Isi moto ntụ ntụ
(Mm) N'ịdị Elu (mm) elu
Rịba ama: Nkọwapụta a bụ naanị ntụpọ, mgbanwe ọ bụla dị n'okpuru ngwaahịa igwe igwe.
Ụkpụrụ Ọrụ Na-arụ ọrụ Raymond Mill:
Nke mbu, ihe nkpuchi bu ihe ndi ozo choro ka o buru ibu, emeso ya elu n'ime ubo nke esi ebughari ihe di iche iche site na ikuku eletriki-magnet na-enye nri na obula ma na-abanye n'ime ime ihe na-achikota. Ndị ọkpụkpọ ahụ na-emegharị aka iji pịa mgbanaka ahụ n'ihi ike a na-awụsi ike na shọvel na-ebute ihe ndị ahụ, zigara n'etiti etiti mgbanaka na rollers iji mechaa mpempe akwụkwọ. Mgbe ị na-egwugharị, ihe ndị ahụ siri ike ga-emegharị site na mbara igwe ịlaghachi n'ime ụlọ na-egweri ihe na-edozi ma na -acha mma ọkụ na-adaba na mmiri ozuzo ma wụpụsịa site na mpempe akwụkwọ-ntụ ntụ dị ka ngwaahịa ikpeazụ.
← Nnukwu nrụgide Mkpochapu na-ebugharị mmiri
S Micro ntụ ntụ Mill →